Uyikhetha njani imiphumo yebhodibhodi kuhlobo ngalunye lwesandi
Ngu-Holly Day, uJerry Kovarksy, uBlake Neely, uDavid Pearl, uMichael Pilhofer
Isixhobo esithile kunye nendibaniselwano yesiphumo kwibhodibhodi yimidlalo eyenziwe kwilitye eliqengqelekayo! Ezinye zihlala zisetyenziswa ngokusekwe kuhlobo lomculo (i-funk kunye ne-wah-wah, umzekelo), kwaye ezinye zinxulunyaniswa nabaculi abathile.
Ukukunceda ufumane isandi osifunayo kwiingoma ezahlukeneyo, nazi izandi ezibalulekileyo zebhodi yezitshixo kunye neziphumo ezisetyenziswa rhoqo kwaye zinxulunyaniswa nazo, zihlala zithiya amagcisa kunye neengoma njengemizekelo. Phawula: Umzekeliso usetyenziswa kwinto entle kakhulu, ke ayiboniswanga apha.
Uhlobo lwepiano kunye nezandi zesinth
Ungasebenzisa iziphumo zebhodibhodi enezandi ezininzi eziqhelekileyo zepiyano:
Ipiyano yeacoustic: Ngamanye amaxesha i-EQ encinci inokunceda ukuguqula ipiyano yengoma ethile okanye uhlobo lomculo. Izandi zeklasikhi zilungile ngesandi esingakhanyi kangako, mellow ngakumbi, kwaye iliwa lisebenza ngepiyano ekhanyayo ngakumbi ukuqaqamba xa kudlala amagubu kunye namagitare.
Omnye umculo wepop kunye nerock usebenzisa i-chorus encinci kwipiyano (cinga ngeJourney's Stop Stop Believin '), kunye ne-chorus enzulu enokwahluka okungaphezulu kwepali (ukwanda kweparameter yobunzulu) kunceda ukwenza ipiyano isandi ngakumbi honky-tonk.
I-Tine / iRhodes ipiyano yombane: Iziphumo ezininzi zinokusebenza kwesi sixhobo sidala:
Ukutshintsha kwesigaba: Sebenzisa useto oluchuliweyo ukuze ufumane uBilly Joel kanye ngendlela ovakala ngayo, uSteely Dan / uDonald Fagen tunes (jonga isitalato iGreen Flower), ngasekupheleni kweminyaka yoo-1980 ooDoobie Brothers (uMzuzu ngoMzuzu), okanye isandi esingafiyo sikaRichard Tee njengoko kubonisiwe uninzi lukaPaul Simon, uGrover Washington (Sisibini nje), kunye nezinto ezirekhodwayo zikaStuff.
Iqela: Sebenzisa ikwayara kunceda ukufumana isandi seJamiroquai kunye nesandi sonke se-LA 1980s (cinga iAl Jarreau, iToto, iQuincy Jones, iChicago, kunye neeJackjackets zakuqala).
Ukuphambuka / wah-wah: Ukuvakala ngathi kukuvuna / ekuqaleni kwee-1970s i-jazz, i-fusion, kunye ne-rock artists, musa ukusebenzisa nayiphi na imodyuli. Sebenzisa i-EQ ukuba iyafuneka ukusenza mnyama isandi kancinci.
Nangona kunjalo, ukugqwetha okuncinci (hayi kakhulu) kuyanceda ukufumana isandi solo somculo wabadlali be-fusion njengoJan Hammer (Mahavishnu Orchestra's Inner Mounting Flame), Chick Corea (kwangoko Buyela kuNaphakade ), Kunye noGeorge Duke, owayehlala edlala ngeekatala. Uninzi lwabaculi basebenzise i-wah-wah, iseyindlela elungileyo yokwenza ipiyano yombane ye-funk (zombini iinguqulelo kunye neenguqu zomhlanga).
Ukulibaziseka: Ungasebenzisa ukulibaziseka ukufumana isandi esine-space sombane u-Herbie Hancock (Mwandishi no-Headhunters), uBrian Auger (Live Oblivion), uRamsey Lewis (uthixokazi welanga), kunye nokurekhodwa kwe-reggae kunye ne-dub.
Reed / Wurlitzer ipiyano yombane: Le piyano yombane ayikhange icutshungulwe kunye neziphumo, kodwa isicelo sokuqala sibeka i-chorus enzulu kuso ukufumana isandi seSupertramp (Ingoma yeLogical kunye neGoodbye Stranger). I-EQ kunye nokugqwetha kunokunceda ekufumaneni isandi esomeleleyo samatye.
Abantu abaninzi bathanda ukubeka ipiyano yombane kwisithethi esijikelezayo.
UClavinet: UClavinet ngokusebenzisa i-wah-wah okanye i-auto-wah yenye yezandi zakudala zomculo we-funk. Mamela iingoma ezinje ngoStevie Wonder (Umhlaba Ophakamileyo mhlawumbi noMntwana Wakho), uBilly Preston (Outa-Space), uHerbie Hancock (uChameleon), kunye nomculo omnandi ongazange wenziwe ngereki okhe warekhodwa, I-Band's Up eCripple Creek. Kwakubonakaliswe ngokugqwesileyo kwireggae, njengakuBob Marley / kwiWailers Burnin ’naseLootin.’
Ukuphazamiseka kuyavakala kulungile kwi-clav, eyayihlala idlalwa ngegitare amp. Ungasiva esi siphumo ngokwamazinga ahlukeneyo kwezi ngoma zikhankanywe ngasentla zikaBilly Preston, uStevie Wonder (Singakwazi ukuSebenza), uLed Zeppelin (unyathelwe phantsi kweenyawo), i-Phish's Tubes, kunye noJohn Medeski (Medeski Martin & Wood) osoloko emangalisa.
Ilungu leTonewheel: Uninzi lwamalungu adumileyo anezandi ezintle nezaziwayo:
Ilungu leTonewheel kunye noLeslie bayahambelana. Abadlali abaninzi bejazz bayaziwa ngokusebenzisa i-brake kunye nokuseta ngokukhawuleza, ngelixa uninzi lwerwala, umphefumlo kunye nabanye abadlali besebenzisa isantya esicothayo nesikhawulezayo. Ukwahlula okubini okubalaseleyo elityeni / komphefumlo nguSteve Winwood kunye noBooker T., bobabini abathanda iziqhoboshi kunye nezicwangciso ezikhawulezayo.
I-rocker eqhubela phambili uKeith Emerson wagijimisa ilungu lakhe kuzo zombini iiLeslies kunye neegita amps ukuze afumane ngaphezulu kwisandi sakhe. Uye wasebenzisa nefuthe lokugqwetha kwi-L-100 encinci ukuba aphathe gadalala ebusuku ukuze afumane ingxelo kuyo (fumana iinguqulelo zeRondo ukuze uve / ubone oku kusebenza).
I-Hard-rock organist uJon Lord (Deep Purple) wayeka ukusebenzisa isithethi esijikelezayo ngokupheleleyo, ethanda ukusebenzisa ii-amps zekatala ukukhulisa isandi sakhe ukuhambelana nelinye iqela (iNtloko yoMatshini).
UTony Banks (iGenesis) wagijimisa ilungu lakhe lewotshi ngokusebenzisa ishifter yesigaba kwaye ngamanye amaxesha ikwayara; mamela iialbham ezinje Umoya kunye neWuthering, Kwaye emva koko kwabakho ezintathu, kwaye Umlawuli.
Synth izandi: Eli qela ludidi olukhulu, kwaye ngokusisiseko, nantoni na enokwenzeka. Yonwaba!
Kuya kufuneka wongeze ezinye iziphumo kwizandi zekatala eziphuma kwikhibhodi yakho ukuze uzenze zibenokwenyani kwaye zikholise. Nazi ezinye izimvo:
Isigingci: I-Guitar isebenza kakuhle ngeendlela ezahlukeneyo. Zonke iziphumo zokumodareyitha zinokuvakala zilungile, njengokulibaziseka kunye nokubuyela umva xa ufuna ukudlala iindawo ezivulekileyo ezingaphezulu. I-Andy Summers (Amapolisa) kwaye ngakumbi i-Edge (U2) badume ngoku. Kwiingoma ezomeleleyo zerock kunye nesolos, ukugqwetha kunye neemodeli ze-amp ziba yinxalenye ebalulekileyo yesandi sakho esifunekayo.
I-Wah-wah isebenza kakuhle kwezinye iingoma zerwala kwaye ngokuqinisekileyo zi-tunky ezimnandi, kwaye i-auto-wah ilungile kwi-funk.
Ikatala yeBass: I-Bass sisandi esinye esingafuni ukuphinda sisebenzise kwakhona, ukuba sikhona. Ukuyigcina yomile kunceda ekubambeni imvakalelo kunye nokucaca kwe groove yengoma. Ngamanye amaxesha i-chorus efihlakeleyo okanye i-flanging ingasebenza, ngakumbi kwi-bass ezingenangqondo. Ngomculo onzima wedwala kunye nentsimbi, ukugqwetha kufanelekile. I-Auto-wah inokusebenzela i-funk ethile.
Unokwenza ntoni ngezixhobo zeokhestra ezingakumbi? Okungaphantsi kuninzi:
Izixhobo zomoya / zobhedu: Ezi zixhobo kunqabile ukuba zifune nantoni na engaphaya komdla omncinci wokungcamla.
Imitya: Zonke izixhobo ze-acoustic zivakala zilungile ngentetho. Iinxalenye zomtya kwiingoma ngamanye amaxesha zivela kwimitya yokwenyani okanye kwii-synthesizers zomtya we-elektroniki kwaye zinjalo. I-chorus encinci okanye isigaba songeza oopopayi kunye nokuhamba kwezi zixhobo.
ndingayithatha iXanax ngelixa ndincancisa
Igama le-valproic acid brand
Ukusebenzisana kwe-prednisone kunye nezongezelelo
Eyona ndlela yokuguqula iwebhusayithi